बच्चाहरु को लागि "Normobakt"। "Normobakt" - मूल्य पुस्तिका
हालैका दशकहरूमा, प्रारम्भिक बाल्यकाल मा आन्द्रा को आंतों microflora को उल्लंघन व्यापक छ। Pediatricians साँच्चै घटना बारे चिन्तित हुनुहुन्छ। आंतों dysbiosis, को कसले अनुसार, रूस मा सबै भन्दा साधारण स्वास्थ्य समस्या भएको छ। नियम, goiter यस कारण लागि, दायाँ चिकित्सा बारेमा र सुधार को राज्य बारेमा बोल्न, सधैं माध्यमिक छ।
को microflora उल्लङ्घन अक्सर एक वर्ष मुनिका बच्चाहरु अवलोकन छ। अन्तरनिहित विकृति प्रवाह delaying र dysbiosis यस उमेर मा complicates। माइक्रोबियल उपनिवेशवाद संसार मा स्टेराइल वातावरण (intrauterine इन्सुलेशन) बाट एक नवजात शिशु: यो एक सरल कारण लागि हुन्छ। प्रसारण को मुख्य स्रोत आमा microflora बाध्य छ। प्रतिरक्षा कारक स्तन दूध (वा बरु, colostrum) ब्लक conditionally pathogenic सूक्ष्मजीवहरु।
तर अवस्थामा जहाँ एक महिला उनको दूध संग आफ्नो बच्चाहरु खुवाउन कुनै तरिका छ मा, समस्या बच्चा को intestines साथ सुरु हुन्छ। फलस्वरूप, त्यहाँ undigested खाना macromolecules एक थुप्रो छ, तिनीहरूले एलर्जी dermatoses कारण। यस्तो अवस्थामा, उपयोगी bifidobacteria microflora को रिकभरी। यो दबाइ "Normobakt" (बच्चाहरु को लागि) बनाउँछ।
यो जैविक एजेन्ट विशेष उपचार र dysbiosis रोकन लागि formulated। यसलाई कायम राख्न र प्राकृतिक microflora, बयान द्वारा प्रमाणित पत्र गर्न अभिप्रेरित छ। Bifidobacterium र Lactobacillus Acidophilus -: को दवादारू को संरचना (1 अनुपात 1 मा) प्रत्यक्ष जीवाणुहरु को उपभेदों समावेश गर्नुहोस्।
दुई घटक को यस्तो संयोजन एक सुरक्षा वातावरण, pathogenic Fungi, बाँच्न गर्दैन सिर्जना गर्न योगदान गोलाकार जीवाणुहरु (Staphylococcus, साल्मोनेला, streptococci) र विभिन्न संक्रमण को activators। यस जैविक थपिएको "Normobakt" (बच्चाहरु को लागि) pathogenic सूक्ष्मजीवहरु र Parietal द्वारा आंतों उपनिवेशवाद देखि पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्दछ क्याल्सियम, फलाम आयनों र भिटामिन डी, बी, K. को अवशोषण बढाउँछ
जीवाणुरोधी एजेन्ट संग साथ दबाइ को कम गर्न सक्छ एन्टिबायोटिक को साइड इफेक्ट। साथै, यसको संरचना समावेश भिटामिन जटिल, सक्रियतासाथ आंतों वनस्पति को चयापचय संलग्न छन्। विशेषज्ञहरु यस अतिरिक्त प्रयोग को चिकित्सकीय प्रभाव पुष्टि गर्नुहोस्। निर्माता अनुसार, लागूपदार्थ "Normobakt" गुणन लाइ रोक्छ हानिकारक जीवाणु को र प्राकृतिक वातावरण कायम। उत्पादन pathogenic आंतों माइक्रो-जीव विरुद्ध उच्चारण antagonistic कार्य छ।
यस अतिरिक्त "Normobakt" (बच्चाहरु को लागि) कसरी उत्पादन गर्न?
उपयोगी लैक्टिक एसिड जीवाणुहरु एक तयारीमा वर्तमान जो केवल प्रयोगशाला मा हुर्केका छन्। lyophilized पूरा "परिपक्वता" पछि (सुकेको), र त्यसपछि पाउच मा प्याकेज। यी जीवाणु एक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी Chr छन् सुनाउँछन्। Hansen, औषध, कृषि र उद्योग लागि पूरक निर्मित।
सबै प्रोबायोटिक संस्कृति पूर्ण सुरक्षा र चिकित्सकीय प्रभावकारिता सुनिश्चित जो एक राम्ररी गुणस्तर नियन्त्रण र नैदानिक परीक्षा undergo। जीवाणुहरु को उपभेदों को धेरै अध्ययन तिनीहरूले आंतों पर्चा को motility सुधार र संक्रमण गर्न प्रतिरोध वृद्धि देखाएका छन्।
तोकिएको हालतमा दुवै dysbacteriosis मा रोगनिरोधी र चिकित्सकीय उद्देश्यका, तर पनि एन्टिबायोटिक को स्वागत समयमा। वाकवाकी, उल्टी, दुखाइ, अस्थिर मल (पखाला, कब्जियत), र fetid सास: यो microflora उल्लङ्घन अवलोकन नैदानिक तस्वीर हटाउन मद्दत गर्छ।
चिकित्सकहरु को अनुमान अनुसार, लागूपदार्थ "Normobakt" (बच्चा) किनभने यो कुनै खतरनाक रासायनिक घटक र गाई गरेको दूध प्रोटिन समावेश गर्छ, पनि बच्चाहरु को लागि बिल्कुल सुरक्षित छ। अभ्यास, यी additives को हानिकारक प्रभाव को कुनै अवस्थामा निश्चित गरिएको छ। तर हामी उपचार गर्न पूर्व एक परामर्श गर्न सुझाव दिन्छौं।
सुनिंनु,: निम्न लक्षण धेरै दुर्लभ अवस्थामा अवलोकन गर्दै एलर्जी rashes र पखाला। लक्षण कम्तिमा एक पहिचान मा समान प्रभाव संग अन्य लागूपदार्थ प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ।
औषधिको खुराक र आवेदन
एक वर्ष मात्र एक कम औषधिको खुराक गर्न आधा - पूरक "Normobakt" (बच्चाहरु को लागि) प्रयोगको लागि एउटा प्रारम्भिक उमेर मा अनुमति। तीन वर्ष छ महिना को उमेर को बीच बच्चाहरु एक दिन एक पटक एक पाउच लागि नियुक्त गरिनेछ। 1-2 पाउच: तीन 12 वर्ष देखि बच्चाहरु। वयस्क - प्रति दिन दुई खुराक। खाना संग चिकित्सा लिनुहोस्। चिकित्सा को अवधि औसत 10 दिन छ। डाक्टर गरेको विवेक अनुसार पाठ्यक्रम केही दिन द्वारा विस्तार हुन सक्छ।
पूरक कसरी रोपेर गर्न?
औषधि बच्चाहरु को लागि "Normobakt" ( "आकार" - मीठा चक्की) को मसले आलु, अनाज र कुनै पनि तरल पदार्थ, उत्पादन तापमान 40 डिग्री भन्दा बढी गर्दैन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मा पतला हुन सक्छ। स्वाद गर्न सुखद अर्थ र खाना बिगार्छ छैन। यो प्रोबायोटिक तयारी को प्रयोग, आंत्र वनस्पतिहरूको पत्र गर्न छोटो अवधि मा मदत गर्नेछ dysbiosis को अप्रिय लक्षण हटाउन र प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन।
अधिकांश मानिसहरू "Normobakt" तयारी गर्न सकारात्मक प्रतिक्रिया। मूल्य (मार्गदर्शन आवेदन मा पूर्ण विवरण र सिफारिसहरू दिन्छ) भालू को रूप मा ट्याब्लेटको पाउडर फारममा, 300-350 rubles को दायरा छ - 200-250 दल्नु। साधन आंत्र अवस्था normalizes र चाँडै पाचन अंगहरु स्वास्थ्य फर्कनुहोस्। तर, एक पूरक आहार मात्र क्रियाशीलता र जठरांत्रिय पर्चा को कामकाज सुधार, तर छैन संक्रामक रोगहरु लागि उपचार छ मा मन सहन गर्नुपर्छ।
त्यसैले, तपाईं एक dysbacteriosis कारण शारीरिक थकान, तनाव, गरीब आहार वा कृत्रिम रुचाउने गर्न कारण शक भने, यो उचित अन्य लागूपदार्थको संग एक अतिरिक्त उपकरण प्रयोग गर्न छ। चिकित्सा समयमा, तपाईं आहार पालना गर्नुपर्छ: भोजन पानी धेरै (शुद्ध पानी, फल पेय, चिया) पिउने, सबै बोसो, धूम्रपान, नुनीन र आहार देखि मीठा हटाउन मात्र गर्मी को रूप मा खान, snacking (घण्टा मा एक तालिका शक्ति व्यवस्था) जोगिन।
सही उपचार र आपूर्ति प्रणाली मात्र परीक्षण पछि डाक्टर अभ्यास हुन सक्छ मानाङ्कन। लेख मा सबै जानकारी उपचार जानकारी र एक निर्देशन लागि प्रस्तुत गरिएको छ। आफ्ना छोराछोरीलाई हेरविचार र आफ्नो स्वास्थ्य निगरानी!
केटाहरू लागि नाम, धनु राशिफल
स्मार्ट ट्राइक बाइक - बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो
बाल विकास:4वर्ष मा पढ्न एक बच्चा कसरी सिकाउन
मोडेल को समीक्षा: कैडिलाक star name साइकिल
के उमेर बच्चाहरु मानिन्छ बच्चाहरु सम्म: राय र वास्तविकता
अभ्यासको उत्पादनमा रिपोर्ट गर्नुहोस् - उत्पादन र पूर्व-स्नातक
यस प्रश्नको जवाफ: "किन भ्रूण अवधि पनि germinal भनिन्छ छ?"
चेरी Brusnitsyna: विविधता, रोपण र हेरविचार को विवरण
अग्र-दल र फैशन डेनिम जैकेट
सकारात्मक लक्षण Georgievsky - मस - यो खतरनाक छ?
"एक बिरालो को साहसिक Leopold"। उहाँको बारेमा सोभियत युग को हरेक बच्चा थाहा
निसान Teana 2013 कार
क्यालोरी सूप: गणना, टेबल र सुझावहरू
माछा मार्ने लागि Waders: कसरी चयन गर्ने? लाभ र चयन मापदण्ड
शहर Vitebsk: केन्द्र मा होटल प्रिमियम र अर्थव्यवस्था वर्ग, र मात्र